“Finalka Europa League waa kulanka ugu dambeeya ee Hazard uu la ciyaari doono Chelsea” – Mourinho – Gool FM
“Finalka Europa League waa kulanka ugu dambeeya ee Hazard uu la ciyaari doono Chelsea” – Mourinho
(Yurub) 24 Maajo 2019. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa sheegay inuu rajeynayo in finlka UEFA Europa League uu noqon doono kulanka ugu dambeeya Eden Hazard uu u ciyaaro kooxdiisa Chelsea.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, xiddiga heerka caalami ee dalka Belgiam-ka Eden Hazard ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid, kaddib markii uu si cad u sheegay inuu doonayo u ciyaarista Los Blancos.
Real Madrid ayaa dooneysa inay xoojiso safka kooxdeeda suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda, si ay markale dib ugu soo laabato inay u dagaalanto tartamada kala duwan, kaddib markii ay xili ciyaareedkan kaga dhameysteen qaab niyadjab ah.
Hadaba tababarihii hore ee kooxaha Chelsea iyo Real Madrid ayaa aaminsan in labada kooxood Los Blancos iyo Blues ay ka wada heshiiyeen qaabka uu 28 jirkan ugu biiri lahaa garoonka Santiago Bernabéu suuqan xagaaga.
Jose Mourinho ayaa wuxuu hadalkiisan imaanayaa kaddib wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” waxaana erayadiisa ka mid ahaa:
“Waxay u egtahay inuu noqon doonto kulanka ugu dambeeya uu Eden Hazard xirto maaliyada buluuga ah ee kooxda Chelsea”.
“Wuxuu ahaa ciyaaryahan door muhiim ah ka ciyaaray guulaha kooxda Chelsea jiilka haatan, Hazard wuxuu isku dayi doonaa in uu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican, waa xiddig aad u wanaagsan marka uu ku gudi jiro gudaha garoonka”.
“Wuxuu doonayaa inuu guuleysto, waxaana laga yaabaa inuu ku biiro Real Madrid kaddib marka uu ciyaaro kulankiisa ugu dambeeya ee kooxda Chelsea.”
Wenger oo sheegay in dhawaan uu dib ugu soo laaban doono kubadda cagta (Maxay noqon doonta shaqada uu ka qaban doono?)